Human X Ray Yomfanekiso, Veterinary X Ray Yomfanekiso, X Ray nokwenza iMifanekiso - HD
Wamkelekile kwi HD Medical
U ingalo DR digital X inkqubo ray imaging ray
UC ingalo DR digital X ray umfanekiso ray mac ...
ibhedi Flat DR digital X ray ray ...
Mobile DR digital X ray umfanekiso ray dev ...
Kutheni ukhetha HD wethu Medical?
R Special & iqela D kuphela izixhobo Yomfanekiso zonyango, DR, CT, MRI, ultrasound.
Ukususela kunyaka wama-2000 ukuya ingqalelo ukwenziwa nokugcinwa kwezixhobo zokuPrinta Medical.
Sele abanini izatifiketi CFDA / ISO9001 / ISO13485, isiqinisekiso CE isicelo.
umthamo yemveliso olomeleleyo kunye cebo ngokungqongqo zolawulo ukuqinisekisa unikezelo olukhawulezayo ibheke.
Eziphathekayo vet pet analog yezilwanyana X ray sy ...
KPET DR3500 pet yezilwanyana Veterinary Radu yedijithali ...
KPET DR5500 pet yezilwanyana Veterinary digital radio receiver ...
KPET DR6000 Vet pet yezilwanyana ray yedijithali ...